ဟောင်ကောင်မှာ အုပ်စုဖွဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပြည်သူတွေ အကြီးအကျယ် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်
ဟောင်ကောင်မှာ အုပ်စုဖွဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပြည်...
22 ก.ค. 2562 - 19:35 น.
ဘူတာရုံရှေ့မှာ တုတ်တွေကိုင်ပြီး စောင့်နေကြတဲ့ လုအုပ်ကြီး
ဟောင်ကောင်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ညက ရထားဘူတာရုံတစ်ခုထဲ မျက်နှာဖုံးစွပ် လူလေးငါးဆယ်လောက် အတင်းဝင်ရောက်လာပြီး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူတွေ အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ် သွားခဲ့ရပါတယ်။
လူမိုက်ဂိုဏ်းသားတွေလို့ ယူဆရတဲ့ အဲဒီလူတွေဟာ တီရှပ်အဖြူ ကိုယ်စီဝတ်ထားကြပြီး ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆို ဆန္ဒပြနေသူတွေနဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ယူအန် လောင်း ရပ်ကွက်မှာ ရိုက်နှက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါဟာ တရားခံတွေကို တရုတ်ပြည်မကြီးဆီ လွှဲပြောင်းပေးရေး ဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြနေမှုတွေအပေါ် ဒီလို အကြမ်းဖက်တာမျိုးကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရတာပါ။
အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို ရဲတွေ ဘာ့ကြောင့် နောက်ကျ ရောက်လာသလဲ ဆိုတာကို ပါလီမန် အမတ်အတော်များများက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ တီရှပ်အဖြူနဲ့ အဲဒီလူတွေဟာ ဘူတာရုံထဲမှာ လူတွေကို သစ်သားချောင်းတွေ၊ သံချောင်းတွေနဲ့ လိုက်ရိုက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
လူ ၄၅ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး တစ်ဦးက အခြေအနေ စိုးရိမ်ရပါတယ်။
အခုလို ဂိုဏ်းဖွဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ဟာ အတော့်ကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာ ကောင်းတယ်လို့ ဟောင်ကောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကယ်ရီ လမ်း က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ အစောပိုင်းက တရုတ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကို ဆန္ဒပြသူတွေ ဖျက်ဆီးခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း မစ္စလမ်းက ရှုတ်ချပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မြို့လယ်က လူထုစည်းဝေးပွဲတစ်ခုမှာ အဓိကရုဏ်းရဲတွေက မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ၊ ရာဘာကျည်ဆံတွေနဲ့ လူစုခွဲခဲ့အပြီးမှာ အဲဒီနေရာကနေ ပြန်လာကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားဆန္ဒပြသူတွေ အခုလို တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါ။
ဒေသစံတော်ချိန် ည ၁၀ နာရီခွဲလောက်မှာ ယူအန် လောင်း ဘူတာရုံထဲကို မျက်နှာဖုံးစွပ် လူတွေ အတင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလူတွေက အင်္ကျီအမည်းဝတ်ထားသူတွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ ဒေသန္တရ သတင်းမီဒီယာတွေက ဆိုပါတယ်။
အမည်းရောင်ဟာ ဆန္ဒပြသူ အများစု ဝတ်လေ့ ရှိတဲ့ အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲ အစိုးရရုံးတွေကို ဝိုင်းထား၊ တရားခံလွှဲပြောင်းမှု ဥပဒေကြမ်း ဆွေးနွေးပွဲရွှေ့ဆိုင်း
"တရားဥပဒေ စိုးမိုးတဲ့ ဟောင်ကောင် လူ့မှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ လုံးဝ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိကြောင်း၊ အကြမ်းဖက် ဆူပူတိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှကို အစိုးရအနေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ လေးလေးနက်နက် ကိုင်တွယ် အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း" အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Stand News ဝက်ဆိုက်အတွက် လိုက်ဗ် လွှင့် သတင်းပို့နေတဲ့ သတင်းထောက် ဂွင်းနက်ဟို လည်း အတိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုအခါ သူ့ကို ဆေးရုံတင်ပို့ထားရပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာမှာ သတင်းထောက်တစ်ချို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေ အသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ ဟောင်ကောင် သတင်းသမားများ အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို ဘယ်သူတွေက စီစဉ်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။
ဒီလူတွေဟာ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေပုံ ရတယ်လို့ အတိုက်အခံ အမတ် လမ် ချွတ်တင် က ပြောပါတယ်။
"ဟောင်ကောင် လမ်းမတွေပေါ်မှာ လူမိုက်တွေ လုပ်ချင်သလိုလုပ်၊ လူတွေကို လက်နက်တွေနဲ့ ရိုက်နှက်ချင်သလို ရိုက်နှက်နေတာကို ခွင့်ပြုနေမှာလား" လို့ သူက သတင်းထောက်တွေရှေ့မှာ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ နောက်အမတ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရေး ချန်းကလည်း ရဲရဲ့ တုံ့ပြန်မှု နှောင့်နှေးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မကြေနပ်ကြောင်း တွစ်တာကနေ ရေးခဲ့ပါတယ်။ "ဟောင်ကောင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရဲအများဆုံး ထားရှိတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရဲတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်သလဲ" လို့ မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တရုတ်အစိုးရကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ အမတ် ဂျူနီယပ်စ် ဟို ကို အဲဒီ အင်္ကျီအဖြူဝတ်ထားသူတွေနဲ့ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်နေပုံ။ လက်မထောင်ပြနေပုံ ဗီဒီယိုတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
မစ္စတာ ဟို ကတော့ အဲဒီလူတွေနဲ့ သူဆက်နွယ် ပတ်သက်မှု မရှိဘူးလို့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ငြင်းဆိုထားပြီး လမ်းမပေါ်မှာ သူ့ကို အဲဒီလူတွေက မှတ်မိလို့ နှုတ်ဆက်လာတာကို ပြန်တုံ့ပြန် နှုတ်ဆက်ခဲ့တာ လို့ ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖမ်းဆီးတာမျိုး မရှိသေးဘူးလို့ တနင်္လာနေ့မှာ ရဲက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေဆဲပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
တိုက်ခိုက်သူတစ်ချို့ဟာ သူတို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ စိုးရိမ်ပုံ မရဘဲ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နေချိန်နဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပြီးမှာ သူတို့ရဲ့ ဆယ်လ်ဖီပုံတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်ခဲ့ကြတယ်လို့ တရုတ်ရေးရာ ဘီဘီစီ သတင်းထောက် စတီဖန် မက်ဒေါနယ်လ် က သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရထံ တရားခံ လွှဲပြောင်းပေးရေး ဥပဒေကြမ်း တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူထု ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြမှုတွေ သီတင်းပတ် အတော်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့အပြီးမှာ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ဟောင်ကောင်အစိုးရက ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုအခါ နောက်ထပ် ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးလာနေတယ် ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာနေပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက ဆန္ဒပြသူတွေဘက်က မလုပ်စဖူး လုပ်ရပ်အဖြစ် တရုတ် ဗဟိုအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး အဆောက်အအုံရှေ့ မျက်နှာပြင်မှာ စာတမ်း ရုပ်ပုံတွေ လျှောက်ရေးခြစ်ပြီး ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်နေရာမှာတော့ "ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာက အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ငါတို့ကို သင်ပေးလိုက်ပြီ"လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတစ်ချို့က ရဲဌာနတစ်ခုရဲ့ အပြင်ဘက်က CCTV ကင်မရာတွေကို ဆေးတွေနဲ့ ဖျန်းပြီး ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့သူပေါင်း လေးသိန်း သုံးသောင်းကျော် လောက် ရှိတယ်လို့ ဆန္ဒပြပွဲ စီစဉ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရဲတွေကတော့ တစ်သိန်း သုံးသောင်း ရှစ်ထောင်သာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီတစ်နေ့တည်းမှာပဲ ရဲတွေကို ထောက်ခံအားပေးပြီး အကြမ်းဖက် ဆန္ဒပြမှုတွေကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်တဲ့ လူထု ဆန္ဒပြပွဲကြီးတစ်ခုလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူ သုံးသိန်း လောက်ရှိတယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေက ပြောနေပေမဲ့ တစ်သိန်း သုံးထောင်လောက်သာ ရှိတယ်လို့ ရဲက ဆိုပါတယ်။
ဒီလို ဆန္ဒပြမှုတွေ ဘယ်လို စခဲ့တာလဲ
တရုတ်နိုင်ငံဆီ တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရေး ဥပဒေကြမ်းကြောင့် ဆန္ဒပြမှုတွေ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။
ဒီဥပဒေကြမ်းဟာ ဟောင်ကောင် တရားစီရင်ရေး သီးခြား လွတ်လပ်မှုအပေါ် ထိခိုက်လာနိုင်ပြီး တရုတ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင် ဝေဖန်တဲ့သူတွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထား အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံရေး အကဲခတ်တွေက ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ လက်အောက်ခံ နယ်မြေဟောင်း တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဟောင်ကောင်ဟာ တရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတစ်ခုတည်း စနစ်နှစ်ခု ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ အုပ်ချုပ်နေတာပါ။ ဒီအုပ်ချုပ်မှု ပုံစံအရ ဟောင်ကောင်ဟာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခု ရထားပါတယ်။ ဟောင်ကောင်အစိုးရ အနေနဲ့ တရုတ်ပြည်မကြီးကနေ သီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် တရားစီရင်ခွင့်နဲ့ တရားရေး စနစ် ထားရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဟောင်ကောင်မှာ အုပ်စုဖွဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပြည်သူတွေ အကြီးအကျယ် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်